A Kpọkuola Ụmụnwaanyị Ka Ha Na-Esonyesi Ike N'Igwù Okwe Ndọrọ Ndọrọ
Dịka a sị na ihe ọbụla nwoke pụrụ ime, na nwaanyị pụrụ ime ya karịa; a kpọkuola ma dụọ ụmụnwaanyị n'ala Nigeria ka ha na-esonyesi ike n'igwu okwe ndọrọ ndọrọ.
Oku a bụ nke a kpọrọ ụbọchị Fridee site n'ọnụ nwunye osote onyeisi ala anyị, bụ oriakụ Dọlapọ Osibanjọ bụ nnukwu onye ọbịa na nnukwu ọgbakọ izugbe ụmụ nwaanyị Anambra nke ahọ 2018, bụ nke weere ọnọdụ n'ama egwuregwu Ekwueme dị n'Awka. Ọ kọwara okwe ndọrọ ndọrọ dịka nke na-ekpebi ma na-egosipụta ka ọnọdụ obibi ndụ ụmụafọ ala ọbụla ga-adị, ma kwuo na oge agaala mgbe ụmụnwaanyị na-anọdụ ala na-eche ka ụmụnwoke kpebie onye ga-achị ha, ọ bụnadị ka o chetaara ha ahụhụ niile ha na-ata n'ịzụlite ụmụaka na ibu nwa n'afọ ọnwa iteghete, bụ nke ọ sị na o kwesighị ha gbachaa mbọ niile ahụ, ha anọrọ n'ụlọ, ụmụnwoke ewere aka ha kpebie onye ga-achị na otu ọnọdụ ụmụaka ahụ ga-esi dị n'ọdịnihu.
O toro aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Obianọ maka ịhụ na ihe karịrị pasenti iri anọ ndị o nyere ọkwa ọrụ dị iche iche bụ ụmụnwaanyị, nke nyegoro ha ohere iji wee mee ntụnye nke ha pụrụ iche na mmepe na otito nke obodo. O tokwara nwunye gọvanọ Obianọ bụ oriakụ Eberechukwu Obianọ na ụmụnwaanyị ndị ọzọ na steeti ahụ n'ihi mbọ pụrụ iche ha na-agba iji nye ụmụnwaanyị ohere ọma na ọnụ okwu, na iji kwalite mmepe ime ime obodo dị iche iche, ma dụọ ha ka ha jide ka ha ji.
N'okwu nke ya, oriakụ Eberechukwu Obianọ, bụ onye sịrị mmadụ niile nnọọ maka ịbịa sonyere ha, kpọkukwara ụmụnwaanyị ibe ya ka ha sonyesie ike n'okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị iji wee wèta ya bụ ezi mgbanwe a tụrụ anya ya n'ala anyị ugbu a, n'ihi na ọ bụ ha ji ike na ihe ọ ga-ewe iji mee ala anyị ka ọ bụrụ ọkacha mma. Ọ dụrụ ha ka onye ọbụla ghara ịla azụ ma ọ bụ gụpụ onwe ya n'okwe ndọrọ ndọrọ, ọ kachasị dịka nnukwu nhọpụta izugbe na-akpụdobe nso na-ala Nigeria ugbu a.
A nọkwazịrị na ya bụ oke mmemme wee gbapee ọgbakọ izugbe ụmụnwaanyị nke ọnwa Ọgọstụ ahọ a.
Ndị ọzọ sonyere na mmemme ahụ gụnyere: oriakụ Bọlaji Ọbasanjọ, bụ nwunye Olusegun Ọbasanjọ chịbụrụ ala Nigeria n'oge gara aga; Minista ala anyị na-ahụ maka ihe metụtara ụmụnwaanyị, bụ oriakụ Aisha Alhasan; nwunye gọvanọ steeti Enugu, bụ oriakụ Ugochi Ugwuanyị, na ogbo ya nke steeti Delta, bụ oriakụ Edith Okowa; nwaanyị mbụ jiri ọkwa gọvanọ n'ala Nigeria, bụ oriakụ Virgy Etiaba, ụmụnwaanyị jigasị ọkwa gọọmenti na ministịrị dị iche na steeti Anambra, ụmụnwaanyị ndị nnọchite anya ọgbọ nta nkwado dị iche iche na steeti ahụ, tinyere ọtụtụ ndị ọzọ.
A nọzịkwara na mmemme ahụ wee kesaara ụmụnwaanyị ọtụtụ ihe onyinye dị iche iche, nke gụnyere akpa osikapa, ọgọdọ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.